कोरोना भाइरसको खोप कहिलेसम्म बजारमा आउला र मूल्य कतिसम्म पर्ला ? हेर्नुस – Rapti Khabar
काठमाडौं, भदौ २१ सबभन्दा पहिले गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखापरेको कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा विश्वभर फैलियो।
यही वर्ष अगस्ट ११ मा रुसले कोरोनाविरुद्ध विश्वमै पहिलो खोप दर्ता गराएको छ। जसको नाम स्पुत्निक-५ राखिएकाे छ। खोप अत्यन्त प्रभावकारी रहेको भन्दै रुसले विश्वको पहिलो सफल खोप यही भएको दाबी पनि गरेको छ।
तर कतिपय देशका विज्ञले रुसले अगाडि हुन तेस्राे चरणकाे परीक्षण नै नगरी हतारहतार खाेप घोषणा गरेको भन्दै यसको प्रभावकारितामा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। तर रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले खाेप स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मानकमा खराे उत्रिएकाे र आफ्नी छाेरीलाई समेत लगाउँदा परिणाम राम्राे प्राप्त भएकाे दाबी गरिरहेका छन्।
जसमध्ये ७ वटा खोप तेस्रो चरणको परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) मा पुगेका छन् भने तीनवटा खोप दोस्रो चरणको परीक्षण तहसम्म पुगेका छन्। डब्लूएचओका अनुसार अन्य १४२ कम्पनीले पनि कोरोना खोप बनाइरहेका छन् र ती अहिले प्रि-क्लिनिकल चरणसम्म मात्र आइपुगेका छन्।
डब्लूएचओका प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथनका अनुसार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको तथा एस्ट्रजेनेका कम्पनीले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिरहेको खाेप नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा उन्नत खोप हो।
तर अर्काे चिन्ता के भइरहेको छ भने खोपको मूल्य कति पर्ला? उता वैज्ञानिकलाई के चिन्ता छ भने कोरोना भगाउन खाेप कतिपटक लगाउनु पर्ला?
यो खोपको दुई सुरुवाती डोज र एक बुस्टर डोज दिन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि सर्वसाधारणले ४० डरलसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
आज २०७७ कात्तिक १० गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस